‘किक’को सिक्वेलमा एमी सलमानकी हिरोइन ! – Etajakhabar
‘किक’को सिक्वेलमा एमी सलमानकी हिरोइन !
मुम्बई – बलिउड अभिनेता सलमान खानको हिट फिल्म ‘किक’को सिक्वेलको सुरसार बलिउडमा सुरु भइसकेको छ । फिल्मको पहिलो भागले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट व्यापार गरेपछि फिल्मको दोस्रो भागका लागि कलाकार छनोट भइसकेको छ ।
समाचारअनुसार फिल्ममा शीर्ष भूमिकामा सलमान नै हुनेछन् । फिल्मका लागि यसअघि नायिका जेकलिन फर्नान्डिज फाइनल गरिए पनि अहिले आएर उनको स्थानमा एमी ज्याक्सनको प्रवेश भएको खबर छ । यो फिल्म सन् २०१९ को क्रिसमसमा रिलिज हुनेछ ।
फिल्मको पहिलो भागमा सलमान र जेकलिन बाहेक रणदीप हुड्डा र नवाजुद्दिन सिद्दीकी पनि थिए । फिल्ममा नवाजले भिलेन चरित्र निर्वाह गरेका थिए । यो फिल्मलाई दर्शकले निकै रूचाएका थिए । नायिका एमीले फिल्म ‘फ्रिकी अली’मा नवाजुद्दीन सिद्दिकीसँग काम गरिसकेकी छन् । उनी रजनिकान्त र अक्षयकुमारको फिल्म ‘२।०’ मा पनि देखिँदैछिन् । नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।
सलमान यतिबेला बैंककमा फिल्म ‘रेस ३’को सुटिङमा व्यस्त छन् । यो फिल्ममा जेकलीन, डेजी शाह, बोबी देवल र अनिल कपूरको पनि अभिनय छ । फिल्मको निर्देशन रेमो डिसुजाले गरेका छन् । यो फिल्म यसै वर्षको इदमा रिलिज हुँदैछ । दक्षिण भारतका फिल्ममा ज्यादा देखिने ब्रिटिश मूलकी एमीलाई पछिल्लो समय अक्षयकुमारको अपोजिटमा फिल्म ‘सिंह इज ब्लिङ’मा देखिएको थियो । एमीको बलिउड डेब्यु भने आर्यन बब्बरका साथमा ‘इश्क’का साथ भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०३, २०७४ समय: १०:१६:०२
श्रीदेवीकी छोरी जानवी कपुर अभिनित फिल्म ‘धड्क’को अर्को गीत सार्वजानिक (भिडियो)
जब ज्योती मगरले तीर्सना बुढाथोकीको अभिनय गरिन् हाँसो थाम्न सकिनन् सम्झनाले (भिडियो)
रणवीर बाहेक दीपिका यि अन्य ३ पुरुषको प्रेममा थिइन्, रणवीरले पनि दीपिका भन्दा अघि यि सुन्दरीलाई प्रेम गर्थे